Factory Valve Control, mpamatsy - Mpanamboatra Valve Control China
ZHD Series (Electric na Pneumatika) Valve fanaraha-maso kely indrindra
Valiny fanaraha-maso ZHD multistage cage control valve dia nampiasa valizy contre symmetric cage multilevel cage. Izy io dia mamehy tanteraka ny haingam-pandeha miaraka amin'ny valizy, ary mampihena be ny tabataba ataon'ny gazy mahery na setroka ao anaty valizy, tsindry multistage manenjana mampihena ny fihenan'ny fisorohana ranon-javatra mahomby, noho izany ny valizy fanaraha-maso marim-pototra ampiasaina amin'ny fampisehoana antonony avo lenta, ny mpanjifa dia afaka misafidy maro ihany koa -mekanisma disphragm lohataona na actuators pneumatic, sns T ...
ZDM Series Valve fanaraha-maso mandeha ho azy
Profile ZDM andian-dahatsoratra miverimberina valizy automatique dia karazana fitaovana fiarovana paompy. Izy io dia miaro mandeha hatrany ny paompy centrifugal rehefa misy vatan'ny paompy manimba ny cavitation (indrindra ny mampita rano mafana amin'ny fiasan'ny entana ambany). Raha vantany vao ambany ny fikorianan'ny paompy noho ny fikorianana efa voatendry dia afaka misokatra tanteraka ny bypass mba hiantohana ny paompy mikoriana faran'izay kely takiana. Na mihazakazaka mihidy tanteraka aza, izany hoe mihazakazaka dia tsy misy, ny fikajiana farany ambany indrindra dia afaka mandalo ihany koa ho an'ny famerenana indray mandeha ho azy. Fanerena r ...
ZDL Series Valve fanaraha-maso mihodina
Ny valiny ZDL andian-dahatsoratra Auromatic recirculation valves dia karazana fitaovana prtectiong pump. Izy io dia miaro mandeha hatrany ny paompy centrifugal rehefa misy fahasimbana na tsy mitombina ny vatan'ny paompy (indrindra ny mampita rano mafana amin'ny fiasan'ny entana ambany). Raha vantany vao ambany ny fikorianan'ny paompy noho ny fikorianana efa voatendry dia afaka misokatra tanteraka ny bypass mba hiantohana ny paompy mikoriana faran'izay kely takiana. Na mihazakazaka mihidy tanteraka aza, izany hoe mihazakazaka dia tsy misy, ny fikajiana farany ambany indrindra dia afaka mandalo ihany koa ho an'ny famerenana indray mandeha ho azy. Fanerena ...
ZDT Model Valve fanaraha-maso mandeha ho azy
Profile ZDT andian-dahatsoratra Automstic recirculation valizy dia karazana fitaovana fiarovana paompy. Izy io dia miaro ny paompy centrifugal mandeha ho azy rehefa misy simba ny cavitation na miovaova (indrindra ny fampitana rano mafana amin'ny fiasan'ny entana ambany). Raha vantany vao ambany ny fikorianan'ny paompy noho ny fikorianana efa voatendry dia afaka misokatra tanteraka ny bypass mba hiantohana ny paompy mikoriana faran'izay kely takiana. Na mihazakazaka mihidy tanteraka aza, izany hoe ny mikoriana lehibe dia aotra, ny fikorianana farafahakeliny dia afaka mivoaka ihany koa amin'ny bypass. ZDT andian-dahatsoratra manana bypass lehibe, ...
Parameter teknika Diameter nominal ： 3/4 “~ 6” tsindry nominal ： ANSI 150LB-4500LB Karazan-tseza mahitsy, karazana hafanana karazana fiasa 150 ℃ -450 characteristics Fampandehanana mitovy ny isan'ny isan-jato isan-jato, Actuator mandeha amin'ny herinaratra na acteuror pneumatic Leakage mihaona amin'ny ANSI B16. 104 V leakage (misy ny tombo-kase VI misy) Valve Characteristics 1) Teôlôjia momba ny fifandonana, firafitra mampihena tsindry marobe. 2) Fahombiazan'ny angovo, ens ...
Fifanarahana mivezivezy amin'ny sela, mekanisma fampihenana tsindry marobe, ialàna amin'ny cavitation amin'ny fomba mahomby, lava ny androm-piainan'ny serivisy. Ny trims rehetra dia azo esorina haingana sy soloina, mora tazomina miaraka amin'ny vidiny mirary. Ny fonosana haingony avo lenta nohajaina dia manome antoka fa tsy misy fivoahana tsy misy fanolo matetika. Ny fananganana siantifika, ny fitaovana avo lenta ary ny fahaiza-manao kanto dia mamela ny plug sy ny tranom-borona hanana fahombiazana manohitra ny fanakanana sy fanoherana fatratra ka amô kely ...
Famaritana Paramètre Diameter nominal 3/4 "~ 4" tsindry nominaly ANSI 150LB-4500LB Karazan-tseza Y maodelin'ny zoro 45 degre Vatan'ny vatana A105, F22, F91, F92, F316H Bonnet standard, rafitra mangatsiaka Mametaka seza stellate tsy miova fonosana tariby vy tsy misy fangarony Manasongadina haingana ny karazany roa ny actuators dia ny acteuror diaphragm pneumatic azo alain-tahaka (pneumatic multi-spring sy acteuror diaphragm lohataona tokana no safidy ...
Antsipirihany Nomery diamondra 3/4 "~ 4" tsindry nominal ANSI 150LB-4500LB Vatan'ny vatana A105, F22, F316H, F91, F92 Toeram-pivoahana haingana Fivarotana tombony 1) Rafitra famonosana faran'izay tsara Ny fampiasana ny fanangonana mari-pana avo lenta Garlock dia manome antoka ny famehezana sy ny diloilo tsara indrindra fampisehoana ary koa fandidiana mora amin'ny toe-javatra azo antoka. 2) kapila matevina mifototra amin'ny kobalt, ny habaka fanamafisana dia ny fiparitahan'ny karbida na ny karbaona karidaidaide ...
MA Series Valve fanaraha-maso
Detail Size range DN25 ~ DN400 Pressure range range 150Ib, 300Ib, 600Ib Body material isan-karazany misy fitaovana, toy ny WCB, WC6, WC9, CF8M, CF8, CF3M, CF3, sns. Flow Characteristic fanokafana haingana, linear na mitovy isan-jato tombony tombony 1) Valve Plug Stability Ny varingarin'ny torolàlana henjana dia manome fahamarinan-toerana plug tena tsara, izay mampihena ny fihoarana sy ny tabataba mekanika 2) Fantsona mikoriana mikoriana bebe kokoa manome alalana ny fanoherana ambany sy ny exce ...